एमाले तीन वटै चुनावमा अत्याधिक बहुमतले अगाडि आउँछ : ओली
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्थानीय, प्रदेश र सङ्घका तीन वटै चुनावमा आफ्नो पार्टीले बहुमत ल्याउने दाबी गर्नुभएको छ । स्थानीय तहको चुनावबारे आज शुक्रवार एमालेले आयोजना गरेको प्रशिक्षण र अभिमुखीकरण कार्यक्रममा अध्यक्ष
ओलीले अहिलेको सत्ता गठबन्धनलाई पराजित गर्ने दाबी गर्नुभयो । उहाँले चुनावमा धाँधली गरेर जित्ने प्रयास नगर्न पनि भन्दै नागरिक आफूहरूको पक्षमा रहेको बताउनुभयो । षड्यन्त्र गरेर पार्टी विभाजन गरिएको भए पनि त्यसको असर कम रहेको र चुनावमा जान
आफूहरू आतुर रहेको अध्यक्ष ओलीले बताउनुभयो । यो पनि पढ्नुहोस् संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले नारायणहिटी दरबारभित्र रेस्टुरेन्ट बनाउन रोक लगाएका छन् । उनले मंगलबार नारायणहिटी दरबारभित्र रेस्टुरेन्ट नबनाउन भन्दै निर्देशन
दिएका हुन् । दरबारभित्र रेस्टुरेन्ट बनाउन लागिएको भन्दै विरोध भइरहेका बेला मन्त्री आलेले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् । यस नारायणहिटी दरबार संग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक ब्यवस्थापन तथा सञ्चालन बिकास समिति र त्यस प्रा.लि. बिच सम्झौता भई अगाडी
बढेको निर्माण कार्यका सम्बन्धमा सञ्चार माध्यमहरुमा आएका समाचारका कारण विवाद सृजना हुन गएकोले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको मौखिक आदेश बमोजिम अर्को आदेश
नभएसम्मका लागि निर्माण कार्य तत्काल रोक्न हुन जानकारी गराइन्छ,’ समितिका कार्यकारी निर्देशक भेषनारायण दाहालले बि. म्यानेजमेन्टलाई दिएको निर्देशन पत्रमा उल्लेख छ ।
२०७८ माघ २८, शुक्रबार प्रकाशित0Minutes 282 Views